Shina Gratings & Covers Manufacturing and Factory | Jrain
Ny takelaka famafazana dia novolavolaina amin'ny ampahany iray ary manasongadina fandehanana an-tongotra tsy matotra. Ny takelaka mahomby momba ny vidiny dia mamela ny fanapahana mahomby amin'ny tranokala hanamaivana ny fako sy ny entona mitondra entana any amin'ireo lalana roa ireo dia mamela ny fampiasana tsy misy tohana mitohy.
Ny fikosoham-borona vita amin'ny fibre vita amin'ny jrain dia maivana kokoa noho ny lanjan'ny metaly sy ny votoaty avo dia manome fanoherana tsara sy mila fikolokoloana kely.
Ny antony iray azo antoka kokoa dia tratra amin'ny alàlan'ny famolavolana votoaty avo kokoa eo am-pototry ny grite hahazoana hery mahery vaika kokoa.
Ny volavola fibre vita amin'ny fibre dia:
• Mpitsahatra ny fahalotoana dia mora vita amin'ny lamba
Ny volon-drongony vita amin'ny fibra fibre vita amin'ny fibra dia miaraka amina famoronana fibre miaraka amin'ny rafitra dimy resin thermosetting.
Ireo resins rehetra dia misy inhibitor UV.
Ny fikosoham-boto dia manana mombamomba fehikibo eo amin'ny tampony ambony ho an'ny fanoherana ny fitetezana. Azo atao ny fangatahana grit.
Mamolavola, Vidy ary Avana
25.4mm 38.1 Kianja 914.4mm X 3048.0mm
25.4mm 25.4mm X 101.6mm mahitsizoro 914.4mm X 3048.0mm
38.1mm 38.1mm Square 914.4mm X 3048.0mm
50.8mm 50.8mm Square 1219.2mm X 3657.6mm
Ny lozisialy & voasarim-borona dia ampiasaina betsaka amin'ny indostria samihafa toa ny simika, pulp ary taratasy, ny fantsom-pahefana, fikarakarana ny fako, ny fanodinana sakafo, ny famafazana sy ny fitrandrahana, ny saltern, ny orinasa batterie, sns.
Previous: Ladders & Handrails
Manaraka: Olana hafa
Ny tohatra tohatra Fiberglass dia tsy vitan'ny tranoben'ny trano ihany fa amin'ny alàlan'ny orinasa maro ihany koa noho ny fampisehoana anti-corrosion, toy ny fikarakarana rano, zavamaniry simika, indostrian'ny solika, fikosoham-pirinty, famokarana herinaratra, orinasa fanodinana sakafo an-dranomasina, indostrian'ny zava-pisotro, lakana lakana, taratasy sy orinasa mpanao onjam-paty sns. (136kg) ao amin'ny Mid-Span Panel weight open Area 1/8 "(3.2mm) na latsaky ny deflection 1/4" (6.4mm) na ...
hamolavola, Mamatotra fanamafisana FRP, Masinina fanamafisana GRP, Nohavaozina Fiberglass, Famolavola grating, Fitaovana fanodinam-bokatra Fiberglass,